Home Wararka Maxaa la Gudboon Qoorqoor iyo Guudlaawe si Degaanadooda ay Rabshado uga Badbaadsadaan?
Maxaa la Gudboon Qoorqoor iyo Guudlaawe si Degaanadooda ay Rabshado uga Badbaadsadaan?
Degaanada Galmudug iyo HirShabeelle waxaa la degaan yihiin dadka Xamar ilaa Baraawe dega inkastoo SH/Hoose ay hadda ka tirsan tahay Maamulka Dhiiga Badan lagu daadiyey si Madaxweyne looga dhigo Lafta Gareen.
MW Qoorqoor oo runtii muujiyey dadaal badan inuu badbaadiyo dowladda NN iyo dalkaba guud ahaan ayaa waxaa uu ku fashilmay inuu arrintaas guul ka gaaro, inkasta oo uu ka warwareegay inuu si cad u sheego qodobada ay Dowladda ka tanasushay oo uu dhowr jeer ku celceliyey dowladdu waa tanasushay.
Dowladda waxaa laga rabay inay wax ka badasaho:
Inay Ciidanka iyo shaqaalaha rayidka ah ka saarto guddiyada doorashada oo ay keento guddi dhexdhexaad ah oo garsoorkiisa lagu kalsoonaan karo- dowladda ma yeelin, mana ka tanasulin, mana rabto waayo waxay ka baqeysaa cadaallada iyo garsoor sax ah inuu doorashada u qabto si saxan oo ay ogyihiin inaysan ku soo noqon Karin.
In Gobolka Gedo ay kasoo qaaddo Maleyshiyada qabiilka Marreexaanka u badan oo ay dharka CDXS u gelisay si gobolkaas uusan doorashada ula wadaagin maamulka uu ka tirsan yahay ee Jubaland. Dowladdu ma sameyn arrinkaas mana ka tanasulin.
In Xildhibaanada Gobollada waqooyi doorashadooda iyo maamulkooda loo daayo Guddoomiyaha aqalka Sare oo ah mas’uulka ugu sarreeya dadka soo jeeda Gobollada waqooyi, waayo waxay ka cxabsaneysaa dowladda inuu si cadaalad ah u qabto oo ay ku soo bixi waayaan shaqaalaha dowladda dadkooda uga go’ay ee Mahadi, Saalax iyo Dubbe. Dowladda kama tanasulin oo weli way ku dhagan tahay.
MW Qoorqoor ha sheego waxay ay dowladda ka Tanasushay?
Haddaba MW Qoorqoor ha noo sheego waxa ay dowladda ka tanasushay ee uu sheegayo. Wali waa lagu wareersan yahay mana haboona in dusha loo saaro eed uusan lahayn, laakiin haddii uu isku dayo inuu dadka marin habaabiyo waxay dhaawaceysaa mustaqbalkiisa siyaasadeed.
Sidoo kale waxaa isagana hawl adag u taallaa MW Cali Guudlaawe oo hogaamiya shacabka Hirshabeelle oo la hubo inaysan rabin in la qabto doorasho aan lagu wada qanacsaneyn.
Qoorqoor iyo Guudlaawe
Kadib markii aan xaaladda aad u daraaseynay waxaa noo sooo baxday in degaanada Galmudug iyo Hirshabeelle aysan raalli ka noqoneyn in la qabto doorasho aan heshiis lagu ahayn maadaama mucaaridka xooggiisa ay ka soo jeedaan labadaan Dowlad Goboleed.
Sidaas darted waxaan labada madaxweyne Qoorqoor iyo Guudlaawe kula talineynaa inay dadkooda dhageystaan oo aysan ka qeyb galin mu’aamarradda ay Villa Somaliya waddo oo ah in iyadoo lakala maqan yahay ay doorasho ka qabsadaan dhowr meelood kadibna ay sheegtaan inay tahay doorasho qaran. Arrinkaas wuxuu u keeni karaa labada madaxweyne inay waayaan xilalkooda waayo degaanka waa lala leeyahay, dadkana waa lagu kicin karaa, iyagoo og inaan labadoodaba aad loogu qanacsaneyn balse sabar iyo u kaadiya lagu wado.
Dadka K/Galbeed waa ka duwan yihiin Jamhuuriyadda inteeda kale waa dadka kaliya ee xoogga lagu haysto oo la dulsaaray shakshi aysan iyaga dooran iyagoo laga xeray hogaamiyihii ay rabeen oo maantaba aan la ogeyn meel uu ku sugan yahay Shekh Mukhtar Roobow Cali. Si loo saaro Lafta Gareen waxaa lagu daadiyey dhigooda la iskana wareysan wixii dhacay.
Haddaba walaalaha K/ Galbeed waxaa la gudboon inay hayryada iska rogaan oo ay iska xoreeyaan Lafta Gareen oo kuna badashaan hogaamiye bulshada Somaliyeed wax la qeybsan kara. Reer K/Galbeed sax maaha inay xaaladdaan ku sugnaadaan iyaga oo deggan degaanada dalka ugu wanaagsan dadkoodana ay yihiin dad shaqeysan kara. Go’aan adag haka qaataan Lafta Gareen oo xoog lagudulsaaray walina ku haysta xoogaas.